Edito Taratra Archive | NewsMada | Page 46
Fahamaizana ny hoe fahaizana politika…
Par Taratra sur 01/10/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
Tsy fanarahan-dalàna, amboletra, jadona, kolikoly… Mampiavaka izao fitondrana izao ireo, raha ny filazan’ny sasany. Manginy fotsiny ny fampiasan-kery, ny fampihorohoroana… Eo koa ny tsy fihainoana sy tsy firaharahana ny hafa, ny fiheveran-tena ho hany manana sy manao ny marina. Efa samy nampiaka-peo izay tsy mety amin’izany ny mpanao politika, firaisamonina sivily, fiangonana… Inona no tena […]
Par Taratra sur 30/09/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
Hafa kely ny zava-misy ankehitriny. Nilaza ireo tompon’andraikitra fa ny volana septambra no manomboka ny taom-pianarana 2016-2017. Ny sekolim-panjakana anefa ny talata ho avy izao vao hisokatra indray. Eo koa ny andro voalazan’ireo mpitatitra amin’ny taxi-be hanondrotana ny saran-dalana ho 500 Ar. Efa mipetraka eny amin’ireo fiara ny filazana momba izany. Raha tsy hoe hahita […]
Par Taratra sur 29/09/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
« Ny atao ihany no miverina ». Fitenenana nalaza tato ho ato indray io. Voatondro tamin’izany ireo efa tao anaty fitondrana teo aloha, izay lasa enjehin’ny fitondrana ankehitriny. Ny endrika isehoany tokoa angamba no mety tsy mitovy, fa ny natao sy ny fitaovana nampiasaina, iray ihany? Herim-pamoretana… Niantefan’ny kiana mivaivay hatrany koa, tato ho ato, ny mpitandro […]
Vahoaka… tompon’ny teny farany
Par Taratra sur 28/09/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
Amin’izay tsy azo anoarana vao hikoropaka hanao kisarisarina dinika ny mpitondra? Tsy misy setriny ireo fitakiana etsy sy eroa, na eo aza ny fanambarana ampahibemaso fa hoe vonona hifampidinika. Arirarira ny raharaha, taritarihina mandra-pahatapitry ny fe-potoam-piasana. Tsy misy avaly afa-tsy ny fampiandrasana ny fifidianana, taona 2018. Resaka ihany ny hoe fandresen-dahatra ny mpanenjika ny asa […]
Par Taratra sur 27/09/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
Fa inona loatra ity mitranga rey olona ? Tao anatin’ny herinandro monja (17- 25 septambra teo), levon’ny afo tao anatin’ny indray mipy maso, ny trano fonenana miisa manodidina ny 250, ahitana tokantrano maherin’ny 380, tany Andovoranto Brickaville, Maroletra Marolambo ary Ankasina Antananarivo Renivohitra. Sanatria tsy mampitovy azy amin’ireny hetsika manokana fanaon’ny fandaharanasa sy ny tetikasa ireny, […]
Fitandroana filaminana sy fitsarana… tsy atokisana
Par Taratra sur 26/09/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
Manjaka ny tsy fahatokisan’ny vahoaka ny fitandroana filaminana sy ny fitsarana. Na tsy ny rehetra aza no manao ny ataony, saro-toerana ny rafitra: anisan’ny mahabe fitarainana noho ny kolikoly, ohatra, raha ny tatitry ny Bianco sy ny Afrobaromètre. Mbola anisan’ny fitaovana politika eo an-tanan’ny mpitondra koa? Izay mitady hihetsika rehetra, potehina amin’ny alalan’ny mpitandro filaminana… […]
Famoretana sisa hery raha izao…
Par Taratra sur 24/09/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
Misy ny mpitandro filaminana voasaringotra amina raharaha maizina etsy sy eroa: fampanofana basy, ohatra. Eo ny fanamarinan-tena amin’ny voka-dratsin’ny atao fa mitifitifi-poana. Mangina fotsiny ny fanapotehana izay mihetsika rehetra, soketaina ho manakorontana sy manongam-panjakana. Anton’izany ny tahotra na tsy fahatokisan-tena amin’ity hoe voafidim-bahoaka. Tena miaro ny vahoaka sy ny fananany ve ny mpitandro filaminana? Ny […]
Valalabemandry… valaka be miandry
Par Taratra sur 23/09/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
Aiza ho aiza ary ho aiza ny valalabemandry amin’izao toe-draharaham-pirenena izao? Raha ny mpitondra hoe lanim-bahoaka, tsy mitsaha-miantso tolo-tanana amin’izay hoe fampandrosoana. Nefa na ny afitsony aza, tsy hita mazava hoe ahoana na aiza marina amin’izany. Manampy trotraka ny vahoaka ny tsy fandriampahalemana, fidangan’ny vidim-piainana… Iforetana sy iaretana mandra-pahatonga ny fifidianana 2018? Mandra-pitrangan’izay hitranga, valaka […]
Par Taratra sur 22/09/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
Rehefa ny olo-marina indray no mikaton-trano sy tsy sahy mivoaka takariva na alina, manjaka ny olon-dratsy. Rehefa ny dahalo no manafika tobin-jandary, ohatra, ratsy fototra izay hoe fandriampahalemana. Rehefa misy mpitandro filaminana miray tsikombakomba amin’ny olon-dratsy, sarotra ny mahazo antoka amin’ny filana vonjy. Rehefa manana fitaovam-piadiana mahery vaika noho ny an’ny mpitandro filaminana ny olon-dratsy […]
Mba henoy sy vakio izay ambaran’ny mpanoratra !
Par Taratra sur 21/09/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
«Masina ny tanindrazana » ! Tsy masimasim-poana izy io fa nisy antony nahatonga izany. Anisan’ireny ny fanarahana ny fomba sy fitandremana ny fady ary ny fahafantarana ny tantara. Ireo rehetra ireo, manomboka very amin’ny Malagasy avokoa. Ny fomba, lasa fombam-bazaha. Tafiditra ao anatin’izany ny fomba fisainana. Nanjary nivadika ho finoanoam-poana ny fady nohajain’ny ntaolo fatratra. Ny tantara, […]
Sangy mihoatra ny loha
Par Taratra sur 20/09/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
« Ry tanindrazan’ny…ô ! Ry Madagasikaran’ny Sinoa … ». Mahatsikaiky ! Samy manana ny hanehoany ny fahitany ny lalan-kizorana na ny lalana itondrana ity Gasikara ity ny tsirairay, amin’izao fotoana izao. Toa mampihomehy, saingy tena mampahonena raha izany tokoa no hiafaran’ilay hiram-pirenena sy ny firenena iray manontolo mihitsy. Raha « sanatria » no tokony hanambara teo ambony kanefa, indrisy, tsy lavitra […]
Mitotongana ka mitoto… ongana
Par Taratra sur 19/09/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
Mby aiza ny raharaham-pirenena? Maso miara-mahita ny rehetra izao: mahandro tsy mahamasaka izay fanarenam-pirenena ny mpitondra, mitoto tsy mahafotsy izay fampandrosoana. Tenenina, minia manao bemarenina? Raha mamaly, fampielezan-kevitra politika hoe miasa sy mahavita tsy misy toa azy hatramin’izay. Fanamarinan-tena no afitsoka amin-javatra efa hita izao fa mihitsoka? Mitotongana ny raharaha, ny fomba fitantanana. Mampiteny ny […]
Herin’ny vola, vandy, vahoho… manjaka
Par Taratra sur 17/09/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
Tena marina ve ny hoe notambazana 1 000 tapitrisa Ar ny depiote Mapar iray mba hivadika ho Hery vaovao ho an’i Madagasikara (HVM)? Na hisy aza ny fanadihadiana, tsy hivoaka ny marina… Nahoana? Tsy vitan’ny hoe miasa ny herin’ny vola amin’ny mpanao kolikoly sy mpividy olona amin’izao, fa manjaka koa ny vandy na lainga amin’ny lany […]
Par Taratra sur 16/09/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
Misesisesy ny eklipsa tazan’ny vahoaka malagasy tato ho ato. Fahamaizinan’ny tany tampoka ao anatin’ny fotoana fohy ny eklipsa. Efa mandavantaona kosa ny fiainan’ny Malagasy no ao anatin’ny fahamaizinana. Efa zatra eklipsa, araka izany, ny Malagasy. Tsy mahita mangirana mihitsy aza fa sasatry ny maizim-bolana ny fiainany. Fampahantrana no manakona ny masoandrom-piainany eto. Anjakan’ny vahiny ny […]
Tsy ampy ny mpamono afo…
Par Taratra sur 15/09/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
Isan’andro, mitatitra ny vaovao misy ary manaitra ny tompon’andraikitra isan-tsokajiny hatrany ny mpanao gazety. Marina, misy ny haino aman-jery miezaka manarontsarona ny zava-misy. Na izany aza, ny ankamaroany kosa, tsy afa-miala amin’ny tranga marina, izay miseho eto amin’ny firenena. Tsy ampy intsony ny mpamono afo, na ireo tena « pompiers » izany, na ireo mpikarama an’ady mpamono […]
Par Taratra sur 14/09/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
Adihevitra tsy mety vita eo amin’ireo mpanabe sasany ny taha tamin’ireo afaka bakalorea amin’ny ankapobeny. Lasa hitsarana ny fahombiazana na tsia eo amin’ny mpitondra amperinasa ny vokatra. Tany aloha tany, tsotra ny hevitry ny amiraly Didier Ratsiraka. Aleo samy hahazo izany “ baoritra” izany ny zanaka malagasy rehetra ahafahany manovo fianarana eny amin’ny ambaratonga ambony. […]
Ho main’ny afo natsangany…
Par Taratra sur 13/09/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
Mahavelona Foulpointe, Ambovomamy, Port-Bergé, Mahajanga an-tampon-tanàna, Ankazomborona, Ambilobe, Vatovavy Fitovinany, Ikalamavony, Analamanga (Isotry, Antohomadinika, Ankasina…). Inona daholo izany ? Faritra nahitana afo, haintrano nandripaka trano maro, saiky tanàna iray manontolo, nandravana fananana, nisy ny namoizana aina, nahatonga traboina maro, sns. Nalaza, tato ho ato, ny afo. «Nandalo Ramaka ka may ny tanety», hoy ny fitenenana. Iza […]
Dinika… lainga… misy fetra
Par Taratra sur 12/09/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
Hatramin’izao, mihirahira ny hoe vonona amin’ny fifampidinihana ny mpitondra. Efa misy aza ny hoe natomboka, na an-dalana, na hotanterahina. Mby aiza? Tafiditra ao anatin’ny fampielezan-kevitra ny raharaha? Manao zavatra, hono, izao fitondrana izao, tsy mihemotra. Na mandeha hatrany ny fanamarinan-tena amin’ny hoe lehibe tsy meloka, mpitondra tsy mba diso. Fialana andraikitra ny hoe fifampidinihana? Na […]
Iala-nenina tenenina, minia marenina…
Par Taratra sur 10/09/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
Mby aiza ny fifandraisan’ny vahoaka sy ny mpitondra amin’izao toe-draharaham-pirenena mafanafana toy ratsy ataon-kavana izao? Tsy hita be ihany izay fifampitokisana eo amin’ny roa tonta… Tsy matoky mpitondra tsy mahatanteraka ny fampanantenany ny vahoaka; ny mpitondra, matahotra vahoaka: izay mitady hihetsika rehetra, toa haninona ihany amin’ny hoe misy ambadika politika. Na ahoana na ahoana, avy […]
Par Taratra sur 09/09/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
Ny fandio iray siny, hono, tsy mahaleo ny fandoto iray tandroka. Mibahan-toerana sy mahazo vahana ho azy mandrakariva ny ratsy, na maro anisa toy inona aza ny tsara. Velon-taraina izao ny maro noho ny afitsoky ny mpitondra. Ireo vitsy anisa eo amin’ny fitondrana na ny manodidina ny mpitondra no tsinay homana aty, manamaimbo ny fitondrana? […]
Mitompo tena fantatra ho meloka…
Par Taratra sur 08/09/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
Tsy misy toy izao fitondrana izao hatramin’izay? Marina izany. Na izy ireo mpitondra, na ny vahoaka: samy milaza izany, na samy hafa aza izay lazaina. Eo ny mpitondra milaza tena fa tsy mbola misy nahavita ny vitany nandritra ny roa taona sy tapany tao anatin’izay antsasaky ny taonjato iray izay: 50 taona… Eo ny asa […]
Par Taratra sur 07/09/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
« Fitondrana mpanao bodongerona, mpanao latsak’alina, mpampihorohoro, mpanao hery famoretana, tsy mpanara-dalàna,… ». Izany sy ny hafa tsy voatanisa (misy no tsy azo lazaina eto) no nikilasian’ny olona ity fitondrana ity, taorian’ireny zava-nitranga afakomaly alina, teny Anosipatrana, ireny. Niraraka ny fanaratsiana ity fitondrana ity, tamin’ny alalan’ny fanehoan-kevitra, na tamin’ny fidirana mivantana tamin’ny radio, na tao anatin’ireny tambajotram-pifandraisana […]
Aza gaga amin’izao raharaham-pirenena izao…
Par Taratra sur 06/09/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
Tokony hivarotra ny fananany ary hizara izany ho an’ny sahirana, hono, ny mpanohitra, raha milaza ho tia vahoaka. Vavan’ny olom-boafidy iray io. Solom-bavan’iza: ny vahoaka sa ny fanjakana? Ny tena no menatra. Fizarana ny fananan’ny tena ve no hoe fitsinjovana vahoaka? Nefa tsy manao izany ny mpitondra milaza isan’andro vaky fa manao fampandrosoana, efa manakaiky […]
Kibay zozoro an-kelika, fa tsy hiady…
Par Taratra sur 05/09/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
Tsy miady, tsy miady, nefa ny kibay an-kelika ihany. Na tsy ho aiza tsy ho aiza, nefa mandray basilava… Fomban’ny mpiandry kendry tohina ireo, mitetika hamely am-pitaka, mamono botraka ho mody tsara ivelany… Tsy izay kosa ny mitranga sy iainana amin’izao fitondrana hafahafa izao, raha ny ady amin’ny kolikoly. Hiady, hiady, ka manao kibay an-kelika. […]
Mampiteny ny noana sy ny moana…
Par Taratra sur 03/09/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
Tsy fahalalam-pomba, hono, ny miteny, raha mbola eo am-pihinanana. Tsy vitan’izany, kofona izay miteny na be resaka eo am-pihinanana. Izany no mampangina ny mpitondra? Tsy lazaina izay atao; izay lazaina, tsy atao. Samy olon-ko azy izao na ny mpitondra na ny vahoaka, tsy manan-javatra iombonana sy mampiombona. Tsy inona fa ny tanindrazana, ohatra. Nefa izany […]